Ahoana ny fisafidianana Riflescope
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ahoana ny fisafidianana Riflescope
Ny fisafidianana basy vita amin'ny basy ho fihazana dia mety ho asa lehibe. Alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra momba ny fividianana dia misy lafin-javatra maro tokony hodinihina rehefa mamaritra ny mety tsara amin'ny riflescope ho anao. Misy kojakoja azonao vidiana koa amin'ny riflescope-nao mba hahazoanao ny fampisehoana tsara indrindra amin'izy ireo. Ny iray amin'ireo fitaovana ireo dia monocular sy peratra hanampina azy ireo.
Raha toa ianao ka tia mandeha mampiasa sakany mafana, ny clip-on mafana dia manararaotra ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny optika mafana sy ny ara-dalàna nefa tsy mila manala ny riflescope anao.
Fitaovana hijerena amin'ny basy
Rehefa misafidy vera dia tsara kokoa ny misafidy kalitao noho ny vidiny. Ny optika misy fanaparitahana fanampiny ambany no tena tsara indrindra satria mampihena ny fihenan'ny chromatic izy ireo, amin'ny fanamafisana ny hamafin'ny sary, ny fahamendrehana amin'ny loko ary ny tsy fitoviana.
Na dia misy fantsom-boribory lehibe kokoa sy mavesatra kokoa aza izay manao asa tsara kokoa amin'ny fitantanana hazavana, ny fantsona 30mm sy 34mm dia mijanona ho sehatra malaza indrindra. Ireto fantsona malaza ireto koa dia matanjaka kokoa noho ireo maodely 1-inch.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny savaivon'ny fantsona, misy ny fitomboan'ny isan'ny fanitsiana, zava-dehibe izany rehefa mikendry lavitra lavitra. Na izany aza, midika ihany koa ny fiakaran'ny lanjan'ilay sakany, fiakaran'ny vidin'ny peratra ampiasaina hametahana ireo fantsona, ary fetran'ny safidy amin'ny fisafidianana ny peratra.
Satria hampiasaina ety ivelany ny sehatra misy anao, ny fantson-drano dia tsy maintsy atao argon na azota entina manadio mba hanala ny etona rano mba hialana amin'ny zavona ao anaty fantsona. Ho fanampin'izay dia tokony ho tsy mahazaka fahatairana sy tantera-drano izy io
Ny solomaso kendrena dia ny ampahany amin'ny sehatra izay tompon'andraikitra amin'ny fampitana hazavana. Any amin'ny faran'ny sehatra no misy azy. Arakaraka ny maha lehibe ny solomaso kendrena no avo kokoa ny fahaizany manangona hazavana ary mazava kokoa ny sary. Na izany aza, ny haben'ny solomaso kendrena ilaina dia zava-dehibe ihany raha oharina amin'ny toe-jiro amin'ny toerana fampiasana. Midika izany fa ny masom-bolo kendrena lehibe kokoa dia tsy vitan'ny manampy lanja fotsiny amin'ny riffle, fa mitaky peratra lehibe kokoa ho an'ny firaiketam-po koa ary mora tohina noho ny hazavana be loatra, noho izany dia manapotsy ny sary.
Ka ny masom-pizahana inona no tokony ho azonao?
Ny solomaso kendrena izay latsaky ny 28mm ny savaivony dia tsy maninona raha ny riffle-nao no tena ampiasaina amin'ny fitifirana akaiky azy ary ambany ny recoil ary ny haben'ny heriny ambany.
Lensa tanjona miaraka amin'ny savaivony eo anelanelan'ny 30mm sy 40mm dia tsara raha mampiasa ny fitaovam-piadianao ianao hihaza hazavana kely ary mampiasa habaka avo lenta sy famerenana kely
Ny masom-bolo kendrena amin'ny habe 50mm sy ambony dia mety indrindra ho an'ny mpitifitra lavitra sy fitifirana avo lenta amin'ny hazavana ambany
Miankina amin'ny faritra andehananao mihaza ny herin'ny fanamafisana ilainao. Ny sehatr'asa fanamafisana ambany sy ambany dia mety tsara raha toa ianao ka mihaza amin'ny faritra iray izay tsy maintsy hanaovana lasibatra haingana amin'ny halavirana fohy. Ny sakany fampitomboana herinaratra ambany dia mety tsara amin'ny fahazoana lasibatra haingana satria manolotra sehatra fijery malalaka izy ireo. Ireo mpihaza amin'ny faritra ilana fahatezerana kendrena lava dia mila habaka herinaratra lehibe kokoa. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ny hetsika dia mihoapampana kokoa amin'ny haben'ny fampitomboana hery lehibe noho ny an'ny hery ambany.
Liozy fanamafisana 1 ka hatramin'ny 4x dia tsara ho an'ny mpitifitra hatramin'ny 100 metatra
Ny fanamafisana 5 ka hatramin'ny 8x dia tsara ho an'izay mitifitra 200 metatra, raha
9x sy mahery ny herin'ny fanamafisana dia tsara ho an'ny fitifirana mihoatra ny 200 metatra
Reticle sy fiaramanidina ifantohana
Ny crosshair hitanao rehefa mijery ny riflescope ianao no antsoina reticle. Misy karazana reticle isan-karazany. Ny tsara hampiasaina dia miankina amin'ny iraka tianao hampiasana azy. Ireo karazana telo mahazatra indrindra dia:
Ny Duplex: ny duplex dia mety amin'ny fihazana sy ny fitifirana kendrena
The Mil-Dot: ity dia tsara ho an'ny fitifirana lavareny ary matetika ampiasain'ny miaramila sy ny mpampihatra lalàna. Ireo teboka ao amin'ny reticle dia manampy amin'ny tombana ny halaviran'ny lasibatra.
Ny BDC: Ny BDC koa tsara ho an'ny fitifirana lavitra. Na izany aza, tomban'ezaka ny reticle
Misy karazana fiaramanidina ifantohana roa
Fiaramanidina ifantohana voalohany (FFP): rehefa manitsy ny haben'ny reticle fa tsy miova ny sary rehefa misy fanitsiana ny fanamafisana.
Fiaramanidina ifantohana faharoa (SFP): io dia rehefa mijanona ho mitovy ny haben'ny reticle raha mitombo sy mihena ny sary rehefa misy fanitsiana ny fanamafisana.
Ny reticle FFP dia tsara ho an'ny mpitifitra lavitra satria mamela ny fihazonana, ny fanitsiana ny rivotra ary ny marina. Na izany aza, lafo kokoa noho ny SFP ny basim-borona FFP. Tsara kokoa ny SFP raha toa ka mampiasa ny sakany ho an'ny riffles isan-karazany ilay mpihaza.
Turrets sy fanitsiana
Eo amin'ny farany ambony ankavanan'ny sehatra dia misy ny tadin'ny rivotra sy ny haavony izay fantatra amin'ny anarana hoe tilikambo. Ny asa lehibe ataon'ny turret dia ny fanitsiana / fanitsiana mitsivalana (fiakarana) sy marindrano (windage) eo amin'ny sehatra. Ny sakany taktika nin-taktika dia misy ny fanitsiana azy amin'ny santimetatra - ¼ santimetatra na 1/8 santimetatra, fa ny sakany amin'ny fomba taktika dia manana tsindry iray minitra toy ny 0.1mm.
Izay tokony ho fantatrao alohan'ny hisafidianana basy
Ny lanjan'ilay sakany dia misy fiantraikany na voafaritra amin'ny savaivony
Ny habaka raikitra amin'ny ankapobeny dia mora vidy kokoa ary manome fomba fijery mazava sy mazava kokoa izy ireo
Ny halehibe ilainao dia miankina amin'ny isan'ireo mitifitra anao
Ny savaivon'ny solomaso kendrena ilainao dia miankina amin'ny fizarana hazavana amin'ny faritra fihazanao. Ny masom-by ambany dia tsy maninona ho an'ny faritra misy hazavana be na faritra be masoandro, fa ny faritra misy hazavana ambany na hariva ary ny fihazana vao maraina dia mitaky lensa lehibe kokoa.